रोनाल्डोको इन्स्टाग्रामको कमाई ३८ मिलियन, मेस्सीको कति ? – Khabar Silo
रोनाल्डोको इन्स्टाग्रामको कमाई ३८ मिलियन, मेस्सीको कति ?
पोर्चुगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एवं अर्जेन्टिनी लिओनेल मेस्सी विच को अब्बल भन्ने प्रतिस्पर्धा भावना त् छदै छ यधपी सामाजिक संजालमा हुने फ्लोव र कमाइको लेखाजोखा समेत हुने गरेको छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले मेस्सीले भन्दा दोब्बर कमाइ इन्स्टाग्राम मार्फत गरेको १२ महिना यताको आकडा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको कमाइमा रोनाल्डोको इन्स्टामा कमाइ ३८ मिलियन पौण्ड रहेको पाइएको छ ।
रोनाल्डोको कमाइ ३८ मिलियन हुदा लिओनेल मेस्सी को भने १८ मिलियन साथै डेभिड बेकामको ८.६ मिलियन पौण्ड सार्वजनिक भएको छ। इन्स्टामा रोनाल्डो एक्कलको कमाइ ३८.२ मिलियन पौण्ड रहेको पाइन्छ । रोनाल्डोलाई ३४ सम्झौता इन्स्टाबाट आएको र हरेक मार्फत ७८०,००० पौण्ड पाएका थिए, जुन १२ महिना यताको रोनाल्डोको इन्स्टा कमाइ हो ।
त्यसबेला म बार्सिलोना छाड्न चाहन्थेँ : मेस्सी
लिओनल मेस्सीले स्वीकार गरेका छन् कि एक समय उनी बार्सिलोना छाड्ने सोचमा पुगिसकेका थिए । तर यो क्लबका कारण नभई स्पेनमा बस्न मन नलागेर भएको बताएका छन् ।
आरएसी वानलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘साँच्चै भन्नुपर्दा त्यसबेला (२०१३/१४ ) म बार्सिलोना छाड्न चाहन्थेँ ।’‘बार्सिलोनाका कारण होइन । करको विवादका कारण म स्पेन छाड्न चाहन्थेँ । मलाई लाग्यो कि ममाथि गलत व्यवहार भएइरहेको छ र अब म यहाँ बस्न चाहन्न ।’
त्यसबेला आफूसामू थुप्रै विकल्प भएपनि औपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव भने नआएको उनले सुनाए ।तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । उनी बार्सिलोनाप्रति यति प्रतिवद्ध छन् कि फुटबल करियर यही अन्त्य गर्न चाहन्छन् । ‘यो प्रष्ट छ, म आफ्नेा करियर बार्सामा नै अन्त्य गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘यो क्लब र परिवारका लागि । हामी बार्सिलोनामा धेरै खुसी छौं ।’
कतिसम्म भने अर्जेन्टिनाको आफ्नो बाल्यकालको क्लब निवेल्सबाट खेलेर सन्यास लिने सपना पनि त्यागेका छन् ।अहिले परिवार प्राथमिकतामा परेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मेरो बच्चाहरुले बनाएको साथीहरु छुट्नु भन्ने चाहन्नँ, जुन म सानो हुँदा भयो ।’
राकिटिकको गोलमा जित निकाल्दै बार्सिलोना फेरि शीर्ष स्थानमा
Posted on June 24, 2020 Author khabar silo
बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगाको पुन: शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मंगलबार राति भएको खेलमा एथ्लेटिको बिल्बाओलाई १-० ले पराजित गरेर बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो। बार्सिलोनाका लागि इभान राकिटिकले ७१ मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। राकिटिकलाई गोल गर्न कप्तान लिओनल मेसीले पास उपलब्ध गराएका थिए। जारी सिजनमा मेसीको यो १५औं एसिस्ट हो। जितपछि बार्सिलोनाले ३१ खेलबाट […]
इंग्ल्याण्डविरुद्धको सिरीजका लागि न्यूजिल्याण्डका कप्तान विलियम्सन टिममा परेनन्
एजेन्सी । न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियम्सन इंग्ल्याण्डविरुद्धको टी २० सिरीजका लागि टिमबाट बाहिरिएका छन । उनी चोटका कारण टिममा नपरेका हुन । नोभेम्बर एक तारिखबाट सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि कप्तान केनको हिपमा चोट लागेका कारण आराम दिइएको छ । यसअघि पनि उनी बंगलादेश विरुद्धको टेष्ट क्रिकेटमा पनि टिम बाहिर रहेका थिए । २९ बर्षे केनको […]
च्याम्पियन्स लिगभन्दा ला लिगा महत्वपूर्ण : मेस्सी
एजेन्सी । बार्सिलोनाका स्टार लियोनल मेस्सीले ला लिगा क्लबका लागि च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रेभन्दा बढी महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा भएको दाबी गरेका छन् । मेस्सीले सन् २००४ मा बार्सिलोनामा पहिलो पटक डेब्यू गरेका थिए । मेस्सी बार्सिलोनामा आएदेखि बार्सिलोनालाई १० लिग जिताइसकेका छन् । यसैगरी मेस्सीले क्लबलाई ४ च्याम्पियन्स लिग र ५ कोपा डेल रे […]
यस्ता गुण भएकी नारी घरमा छिन् भने मान्नुस् तपाईंको घर स्वर्ग समान
येही एक फोटो कारण जरिन बनिन ट्रोलको शिकार !! जरिनको कडा जवाफ
यस्तो हुन्छ सिंह मेष र धनु राशि हुने व्यक्तिको भाग्य तपाईको कुन
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, जेष्ठ ३० गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने १ हजार ७ सय ८४ वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा
यी राशिका युवती बन्छन् निकै मिलनसार पत्नी, पतिलाई गर्छन धेरै माया